Realme GT Master Edition, nyocha miri emi na nnwale igwefoto | Androidsis
Ọ bụrụ na ị na -eso anyị mgbe niile, ị ga -amaworị nke ahụ anyị nyochara Realme GT n'oge na -adịbeghị anya, ngwaọrụ sitere na ụlọ ọrụ Eshia nke chọrọ ịkwanye mantra nke uru maka ego ka ọ dị ndị ọrụ gam akporo ka ọ na -achọ. Ugbu a, anyị nwere akwụkwọ nrụpụta nke ị gaghị achọ ka uche ya funahụ gị.
Chọpụta anyị Realme GT Master Edition, ngwaọrụ ejiri okpueze nke anyị marala. Anyị na-enyocha nke ọma na mgbakwunye Realme ọhụrụ a wee chọpụta ma ọ bụrụ na ọ na-atọ ụtọ ka ọ na-ada. Echefula mmetụta anyị, gịnị bụ nke gị?
Anyị ekpebiela ịgbanwe usoro nyocha anyị ntakịrị, oge a ịpụ apụ ga -apụ na YouTube ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ha site na netwọkụ mmekọrịta anyị. Ị nwere ike lee anya na unboxing nke a Realme GT Master Edition site na Twitter yana site na Instagram, yabụ echefula ya ma were ohere soro anyị. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike zụta ya na AliExpress yana ntinye mmeghe.
1 Nhazi ndị Japan, na -atụgharị curl
3 Ọdịnaya ọdịnaya
5 Njikọta na obodo kwụụrụ
Nhazi ndị Japan, na -atụgharị curl
Agbanyeghị na ọ na -eketa nnukwu ahịrị sitere na Realme GT, mbipụta Master a nwere nkọwa ụfọdụ na -eme ka ọ mara mma karịa, ma ọ bụ opekata mpe ihe mara mma. Anyị nwere chassis polycarbonate, ihe a na -ahụ nke ọma na ịdị arọ nke gram 178 (akpụkpọ anụ vegan gụnyere). Mpempe akwụkwọ vinyl yiri akpụkpọ ahụ, ma ọ bụ dịka ha na-akpọ ya ugbu a akpụkpọ anụ vegan na azụ ọ nwere enyemaka na -adọrọ adọrọ nke ukwuu yana ngwụcha dị elu.
Akụkụ: 159 * 73 * 8 (8,7mm na akpụkpọ anụ vegan)
Ibu ibu: Gram 174 (gram 178 nwere akpụkpọ anụ vegan)
N'aka nke ya, ogologo sentimita 16 ahụ na -adị mma kwa ụbọchị na -eburu n'uche ịdị mfe ya na oke milimita 8 ya. Akụkụ igwefoto a ma ama n'azụ na -ada ụda, ebe bọtịnụ Ike ka dị na bezel aka nri yana ntọala olu n'aka ekpe. Maka obere bezel, a na-ahapụ USB-C yana perforation nke ọkà okwu yana 3,5 mm Jack nke ka dị.
Igbe ahụ gụnyere igbe silicone matte nke ọma nke ọma na nke ahụ na -e completelyomi nchapụta mbụ nke ngwaọrụ ahụ, ihe dị ịtụnanya. Otu ihe ahụ na -eme na ihe onyonyo ihe nchebe ihuenyo etinyerelarịrị na m na -akwado ka ejiri iko dị nro dochie ya, ihe na -ebuli mmetụta dị mma na ekwentị ọ bụla.
Ịgbanwe ngwaike ka ịhazie ọnụahịa, Nke a Realme GT Master Edition na -abịa na Snapdragon 778G yana ndakọrịta maka netwọ 5G yana yana 8 GB nke LPDDR5 Ram nke a ga -agbakwunye 3 GB nke RAM mebere, opekata mpe na ngalaba nke anyị nwalere wee jụ nyocha a. N'akụkụ a, Realme anaghị afụcha, dịka ọ na -eme na nchekwa 128 GB, n'agbanyeghị na anyị enwebeghị ike ịchọpụta ma ọ nwere sistemụ UFS 3.1 dịka ọ na -eme nwanne ya nwoke nke okenye. Banyere GPU, nzọ na Adreno 642L dị ka atụ anya ya.
Nlereanya GT Master Edition
Nhazi Qualcomm Snapdragon 778G - 5G
RAM 8 GB LPDDR5 + 3 GB mebere
Nchekwa n'ime 128
Igwefoto na-aga n'ihu 64MP f / 1.8 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP Macro f / 2.4
Igwe n'ihu 32 f / 2.5 GA 78º
Njikọ Bluetooth 5.2 - 5G DualSIM- WiFi 6 - NFC - GPS abụọ
Batrị 4.300 mAh na Ọsọ ọsọ 65W
Nsonaazụ ya bụ ịdị mmiri mmiri, ịdị mfe nke ọrụ yana ibelata oge itinye ihe. Anyị nwere mmasị na arụmọrụ nke netwọkụ WiFi 6 dị ka ị na -ahụ na vidiyo. Realme UI 2.0 so ya, nke na -ahapụkwa anyị ntakịrị ụtọ dị n'ọnụ anyị n'ihi bloatware gụnyere yana na ọ nweghị onye rịọrọ.
Anyị nwere panel nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,5 na mkpebi FullHD + nke Samsung rụpụtara, ọkachasị Super AMOLED Site na ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz nke ji okpukpu atọ karịa n'ihe gbasara ihuenyo mmetụ, ọ nwere 100% nke ụdịdị DCI-P3, nke na-eme panel otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị nke ngwaọrụ ahụ. Ihie ahụ zuru oke maka ndị na -ahụ maka mpụga na -achọsi ike ma ọ masịrị anyị n'ezie iji ya.
Banyere olu, agbanyeghị ọkwa ọkwa igwe okwu abụọ, anyị hụrụ ọkwa dị elu nke onye dị ala nke nwere oke zuru oke na ezigbo mma, Ọ bụrụhaala na i jighị aka gị kpuchie ya n'amaghị ama, ikekwe akụkụ kacha nta nke ahụmịhe mgbasa ozi.
Banyere sensọ atọ n'azụ, anyị na -ahụ nsonaazụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke Realme GT, na mbipụta Master a anyị ka nwere ezigbo ihe mmetụta dị mma mana ụlọ ọrụ ezughị ezu:
Isi ihe mmetụta: 64 MP f / 1,8
Nnukwu ihe mmetụta akụkụ: 8 MP f / 2,3 na 119º
Ihe mmetụta macro: 2 MP f / 2,4
Dị ka nsonaazụ ikpeazụ, isi ihe mmetụta na -enye arụmọrụ dị mma ma ọ bụrụhaala na anyị anaghị achọ ka ọdịiche ọkụ. Wide Angle, mbugharị na ọkachasị Macro bụ ụlọ ọrụ na -agbanwe agbanwe mana nke ahụ na -adị mma na ọnọdụ dị oke mma. Igwefoto, n'agbanyeghị inwe nhọrọ dị iche iche, na -emetụta n'ụzọ doro anya na ịdị ala nke ihe mmetụta "sekọndrị".
Ọnọdụ eserese na igwefoto selfie (32 MP nwere oghere f / 2.5) a na -etinye ha ọzọ site na ngwanrọ karịrị akarị. Ọ bụ ezie na igwefoto n'ihu na -eme nke ọma na ọnọdụ ọkụ dị mma, ihu na azụ 'eserese' nwere ọtụtụ ihe ka mma.
Banyere ihe ndekọ vidiyo, Anyị na -akpọ gị òkù ka ị gaa ozugbo site na nyocha vidiyo anyị ebe anyị mere ndekọ na ozugbo yana nnwere onwe na ihe mmetụta niile nke Realme GT Master Edition.
Ịrụ ọrụ kaadị WiFi 6 gị tụrụ anyị n'anya ọgbara ọhụrụ nke nyere anyị ohere ị nweta ihe kachasị na arụmọrụ nke njikọ eriri anyị. Ọ bụ ihe nwute na anyị enwetaghị nsonaazụ site na netwọkụ 5G n'ihi mkpuchi adịghị mma.
Batrị 4.300 mAh nwere ngwa ngwa 65W Ọ na -egosi ihe zuru oke maka ịrụ ọrụ kwa ụbọchị, anyị amaralarị na nke a ga -adabere nke ukwuu na ojiji anyị na -eji ọnụ.
Anyị nwere ezigbo ọrụ sitere na Realme n'ebum n'uche 'ime ka ndị mmadụ mara' GT Master Edition, na -emezigharị atụmatụ na atụmatụ iji nweta ọnụ ahịa euro 299 (na ire ere) nke na-agbanwe ya ngwa ngwa site na imewe, ike na ịdị n'otu ka ọ bụrụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha dị egwu.
Nlezi anya na nlebara anya, dị oke ọkụ
Ngwa ngwaike dị oke ọnụ
Ezigbo ihuenyo na ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 65W
Enwere ike melite igwefoto
Ọ dị mma, mana ọ ka bụ plastik
Bloatware na Realme UI 2.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme GT Master Edition, imewe ndị Japan iji chegharịa ihe ịga nke ọma [Analysis]